चितुवा खोज्दै जङ्गलमा विज्ञ | Nagarik News - Nepal Republic Media
दमौली- जिल्लाको भानु नगरपालिकाका विभिन्न वडामा बालबालिकामाथि आक्रमण गर्ने चितुवा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका विज्ञ टोली जङ्गलमा परिचालित भएका छन्। भानु नगरपालिका–१, २, ३ र ४ मा चितुवाको आक्रमणबाट डेढवर्षको अवधिमा ६ जना बालबालिकाको मृत्यु भएपछि चितुवा नियन्त्रणका लागि कोषका विज्ञ टोली जङ्गलमा परिचालित भएका हुन्।
चितुवा नियन्त्रणका लागि कोषका ६ जना विज्ञ टोली परिचालित भएको डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख केदार बरालले जानकारी दिए। 'स्थानीयस्तरबाट चितुवा नियन्त्रणका लागि भएको प्रयास असफल भएपछि विज्ञ टोलीको सहयोगमा चितुवा नियन्त्रणमा लिन खोजिएको हो,' बरालले भने,'उक्त टोलीले नतिजा निकाल्नेमा विश्वस्त छौं।' विज्ञ टोलीका साथमा स्थानीय शिकारीलाई पनि परिचालन गरिएको छ।
कोषका वरिष्ठ विज्ञ डा. सुवेदीले दुई महिनाभित्रै परिणाममुखी काम देखाउने गरी टोलीले काम सुरु गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार चितुवा प्रभावित वडाबाट दुई/दुईजना स्थानीयवासीलाई टिममा सहभागी गराइएको छ। 'यस ठाउँको यथार्थ जानकारी भएका स्थानीयवासीलाई टिममा समावेश गरेपछि हामीहरुलाई काम गर्न सहज हुन्छ,' डा. सुवेदीले भने, 'जङ्गलको सबै ज्ञान उहाँहरुलाई हुने हुँदा उहाँहरुकै सहयोगमा चितुवा नियन्त्रणमा लिनेछौं।'
'जङ्गलमा पाइने जनावर चोरी शिकारीले नष्ट हुँदै गएपछि चितुवा आहारा खोज्दै बस्ती नजिक आउने गरेको पाइएको छ,' डा. सुवेदीले भने, 'बस्ती नजिक आएको चितुवाले आहाराकै लागि मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने गरेको छ।' चितुवालाई प्रतिदिन चार किलो मासु आवश्यक पर्दछ।
चितुवाको आक्रमणबाट विसं २०७४ फागुन १ गते भानु नगरपालिका–३ दोरदोरका ६ वर्षीय विशाल श्रेष्ठ, विसं २०७५ कात्तिक २९ गते भानु नगरपालिका–४ जोखानेका ४ वर्षीया रञ्जिता लम्साल, मङ्सिर १५ गते भानु नगरपालिका–२ ढल्केवरका १० वर्षीय अमृत गुरुङ, जेठ २४ गते भानु नगरपालिका–२ भकुण्डथोक निवासी ९ वर्षीया पुष्पा अधिकारी, असोज २१ गते भानु नगरपालिका–१ जामुनेगैह्राका ४ वर्षीय आशिष बानियाँ र भानु नगरपालिका–२ फुस्रेटारमा ७ वर्षीय ऋतिक रोकाको मृत्यु भएको छ।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७६ १२:०९ शनिबार
चितुवा जङ्गल विज्ञ